FTA inokurudzira masangano ekufambisa eUS kuti awedzere majekiseni ekudzivirira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » kutakura » FTA inokurudzira masangano ekufambisa eUS kuti awedzere majekiseni ekudzivirira
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Rail Kufamba • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Federal Transit Administration (FTA) iri kushevedza vatungamiriri vekufambisa kuti vape ruzivo urwu nevashandi, uye kuti vaite zvese zvaunogona kukurudzira kubaiwa nhomba pakati pevashandi vako.
COVID-19 majekiseni ekudzivirira ari kuramba achiwedzera kuyambuka USA.
Kusazeza kurwisa mushonga kwakadzika zvakare munyika.
Masangano ekufambisa eU.S. akakurudzira kuti vaone kubaya nhomba kwevashandi vekufambisa.
Sezvo COVID-19 majekiseni ekudzivirira ari kuramba achikwira mhiri kweUnited States, Federal Transit Administration (FTA) inokurudzira masangano ekufambisa kuti ave nechokwadi chekuti vashandi uye nharaunda vane mukana wese wekuwana mushonga.
Sekureva kweMayo Clinic uye iyo Centers yeDhiase Kudzora nekudzivirira (CDC), mumwedzi miviri yapfuura, vazhinji vekuAmerican vatanga kubaiwa jekiseni vachipikisa COVID-19. Yakanga iri panguva iyoyo iyo Kudya neDrug Administration yakatendera mushonga wePfizer-BioNTech COVID-19 musi waAugust 23.
Kusazeza kubatira mushonga kwakadzika zvakare, sekureva kweongororo ichangobva kuitwa yeIpsos. Vane gumi nemana kubva muzana vevanhu vemuAmerica izvozvi vanoti ivo havatombowana jekiseni.
Federal Transit Administration (FTA) irikushevedza vatungamiriri vanofambisa kuti vape ruzivo urwu nevashandi, uye kuti vaite zvese zvaunogona kukurudzira kubaiwa nhomba pakati pevashandi vako. Mamwe masangano akapa nguva yekubhadhara yakabhadharwa kuti agamuchire jekiseni, mibairo yemari, kana makadhi echipo kukurudzira vashandi kuti vabaye jekiseni.
Uye zvakare, kune avo vamiririri vakashanda nesimba kukurudzira kubaiwa nharaunda munharaunda yako, tinovimba uchaenderera mberi nekuedza uku, uye wotanga matsva. Vamwe vanhu vekuAmerican vanoda jekiseni uye kufamba kunogona kuvabatsira kuenda kumisangano kana kuunza mikana yekudzivirira munharaunda dzavanogara. Kubatsira kugovana meseji yekudzivirira munharaunda yako, County-level CDC fungidziro yekuzengurira kwejekiseni kweCOVID-19 inogona kuona nzvimbo dziri mukati meyako nzira yekushambadzira yenzvimbo yebasa ingangoda rubatsiro rwakawedzerwa kusvika mujekiseni.
Kubaya nhomba ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekuzvidzivirira pamwe neavo vakakukomberedza kubva pakubata COVID-19. Kuti kuwedzere kudzivirirwa kubva pamusiyano weDelta uye kudzivirira pamwe kuiparadzira kune vamwe, CDC inopa zano munhu wese kuti abate jekiseni nekukurumidza. FTA inokurudzira vashandi vekunze vanoenda mberi - pamwe nemasangano ekufambisa avanoshandira - kuita zvirongwa zvekuzvibaya nhomba uye kuramba vachirerutsa mukana wekuwana nzvimbo dzekudzivirira nhengo dzemunharaunda dzisati dzapfurwa.
FTA iri kutsigira nzira yekudzivirira ejeni rekufambisa nekupa zvipo pasi peAmerican Rescue Plan kubatsira kubhadhara mari idzi uye kukurudzira vatungamiriri vanofambisa kuti vape mabasa anoita kuti nharaunda yavo, kusanganisira vashandi vavo, vatore mapfuti. Mahofisi ekufambisa anoda kuwana rumwe ruzivo nezve kukodzera kwemari anofanirwa kushanyira maFAQs eFTA maererano neCOVID-19.
FTA inokurudzirawo masangano ekufambisa kuti ashandise CDC, iyo Dhipatimendi rezvekutakura uye iyo Occupational Kudzivirira uye Hutano Hutongi (OSHA) toolkit kubatsira kuwedzera kuvimba uye kutora majekiseni eECOVID-19 pakati pevashandi vekufambisa.